Maxaad uga baahan tahay inaad ka ogaato kulanka maanta ee Dekedda iyo Jeenyo, kaasoo go’aamin kara hanashada horyaalka? – Gool FM
Toddobadii ciyaar ee ugu dambeysay oo ay wada ciyaareen labadaan kooxood waxa ay iska dhaliyeen 17 gool, waxaana 13 ka mid ah dhalisay kooxda Jeenyo.
Kulankii ugu dambeeyay ay wada ciyaaraan labadan kooxood waxaa 3-0 guusha ku qaadatay kooxda Jeenyo.
Maadaama ay isku dhibco yihiin kooxahaan hadane naadiga Jeenyo United ayaa farqiga goolasha ugu jirta kaalinta labaad.
Cabaas Aamiin Maxamed ayaa dib ugu soo laabtay kooxda maadaama uu calaamadda gaduudan ku maqnaa kulankii ugu dambeeyay, halka xiddiga C/casiis Hoomeey uu kulankaan ka maqan yahay.
1: Kulanka maanta oo jimco ah dhex mari doono kooxaha Dekedda iyo Jeenyo ayaa ah ciyaarta go’aamin karta hanashada horyaalka ee kooxda Banaadir sababtoo ah in labadan kooxood ay ku kala tagaan barbaro waa tan soo gabo gabeyneysa rajada labadaas kooxood ay ka qabaan hamiga horyaalka, iyadoo Banaadir ay sidaas ugu guuleysaneyso horyaalka waa haddii ay barbaro ku kala tagaan Jeenyo iyo Dekedda.
2: Midkood haddii ay badiyaan kooxaha Jeenyo iyo Dekedda oo dhanka kale kooxda Banaadir ay barbaro ka hesho naadiga Gaadiidka ama ay ka badiso waxa ay xaqiijin doontaa hanashada horyaalka.
Kooxda Jeenyo ayaa ciyaartii ugu dambeysay waxa ay barbaro 0-0 la dhaafi weysay naadiga Elman, halka Dekedda ay 1-0 uga adkaatay naadiga Gaadiidka.
Natiijooyinka Toddobadii ciyaar ee ugu dambeysay labada kooxood:-
11/07/2012 Dekedda 1 : 1 Jeenyo FC
27/10/2012 Jeenyo FC 1 : 1 Dekedda
13/01/2014 Dekedda 0 : 3 Jeenyo FC
13/03/2014 Jeenyo FC 1 : 1 Dekedda
19/02/2015 Dekedda 0 : 1 Jeenyo FC
21/05/2015 Jeenyo FC 3 : 0 Dekedda
15/02/2016 Jeenyo FC 3 : 1 Dekedda
HUBAAL: Alex Oxlade-Chamberlain ma ciyaari doono Euro 2016